Nokware Kristofo Nyinaa Yɛ Asɛmpakafo
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | January 1, 2002
KENKAN WƆ Albanian Arabic Armenian (West) Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Malayalam Mizo Moore Myanmar Norwegian Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Rarotongan Romanian Samoan Sepedi Seychelles Creole Shona Silozi Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Zulu
“Monto dwom mma [Yehowa, “NW”], munhyira ne din, monka ne nkwagye da biara da.”—DWOM 96:2.
1. Asɛmpa bɛn na ɛsɛ sɛ nnipa te, na ɔkwan bɛn so na Yehowa Adansefo ayɛ nhwɛso pa atrɛw asɛm a ɛte saa mu?
WƆ WIASE a asiane sisi mu da biara da no, ɛyɛ awerɛkyekye ankasa sɛ wubehu sɛ, sɛnea Bible ka no, ɛrenkyɛ na ɔko, nsɛmmɔnedi, ɔkɔm, ne nhyɛso aba awiei. (Dwom 46:9; 72:3, 7, 8, 12, 16) Nokwarem no, so ɛnyɛ eyi ne asɛmpa a ɛsɛ sɛ obiara te? Saa na Yehowa Adansefo susuw. Wonim wɔn wɔ baabiara sɛ nkurɔfo a wɔka “papa ho asɛmpa.” (Yesaia 52:7) Ɛyɛ nokware sɛ esiane Adansefo no bo a wɔasi sɛ wɔbɛka asɛmpa no nti wɔn mu bebree ahyia ɔtaa. Nanso, wɔwɔ nkurɔfo ho adwempa. Na hwɛ nsiyɛ ne animia ho adanse a Adansefo no wɔ!
2. Dɛn ne ade biako nti a Yehowa Adansefo yɛ nsi no?
2 Nsi a Yehowa Adansefo da no adi nnɛ te sɛ afeha a edi kan mu Kristofo no de. Roma Katolek atesɛm krataa L’Osservatore Romano kaa wɔn ho asɛm ma ɛfatae sɛ: “Sɛ na wɔbɔ Kristofo a wodi kan no asu pɛ a, na wɔte nka sɛ ɛyɛ wɔn asɛyɛde sɛ wɔtrɛw Asɛmpa no mu. Asomfo no de wɔn ano bɔɔ Asɛmpa no dawuru.” Dɛn nti na Yehowa Adansefo yɛ nsi yiye te sɛ tete Kristofo no? Nea edi kan, efisɛ asɛmpa a wɔka no fi Yehowa Nyankopɔn ankasa hɔ. So biribi foforo wɔ hɔ a eye a ebetumi ama wɔayɛ nsi asen eyi? Wɔn asɛnka adwuma no yɛ odwontofo no nsɛm no ho dwuma a wodi: “Monto dwom mma [Yehowa, NW], munhyira ne din, monka ne nkwagye da biara da.”—Dwom 96:2.
3. (a) Dɛn ne ade a ɛto so abien nti a Yehowa Adansefo yɛ nsi no? (b) Dɛn na ɛka ‘Onyankopɔn nkwagye’ ho?
3 Odwontofo no nsɛm no kae yɛn ade a ɛto so abien nti a Yehowa Adansefo yɛ nsi no. Wɔn asɛm no yɛ nkwagye asɛm. Nnipa binom yɛ nnwuma a ɛfa aduruyɛ, asetra, sikasɛm, ne neɛma foforo ho de boa wɔn yɔnko nnipa ma wɔn asetra tu mpɔn, na yɛkamfo mmɔden a ɛte saa a wɔbɔ no. Nanso, sɛ yɛde biribiara a onipa betumi ayɛ ama ne yɔnko no toto ‘Onyankopɔn nkwagye’ ho a, na esua koraa. Yehowa nam Yesu Kristo so begye ahobrɛasefo afi bɔne, yare, ne owu mu. Wɔn a wobegye wɔn no bɛtra ase daa! (Yohane 3:16, 36; Adiyisɛm 21:3, 4) Ɛnnɛ, nkwagye ka ‘anwonwade’ a Kristofo ka ho asɛm bere a wɔyɛ nea nsɛm yi kyerɛ no: ‘Monka Onyankopɔn anuonyam, amanaman mu, n’anwonwade, aman nyinaa mu. Na Yehowa yɛ kɛse, na ɔsɛ ayeyi sɛ, ne ho yɛ hu, anyame nyinaa so.’—Dwom 96:3, 4.
Owura no Nhwɛso
4-6. (a) Dɛn ne ade a ɛto so abiɛsa nti a Yehowa Adansefo yɛ nsi no? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu daa nsiyɛ adi wɔ asɛmpaka adwuma no mu?
4 Ade a ɛto so abiɛsa wɔ hɔ a enti Yehowa Adansefo yɛ nsi. Wodi Yesu nhwɛso akyi. (1 Petro 2:21) Saa barima a ɔyɛ pɛ no fi koma nyinaa mu gyee asɛyɛde no toom ‘kaa asɛmpa kyerɛɛ amanehunufo.’ (Yesaia 61:1; Luka 4:17-21) Enti, ɔbɛyɛɛ ɔsɛmpakafo. Okyinii Galilea ne Yudea nyinaa ‘kaa ahenni no ho asɛmpa no.’ (Mateo 4:23) Na esiane sɛ na onim sɛ nnipa pii begye asɛmpa no atom nti, ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Otwa adwuma no dɔɔso, na adwumayɛfo no de, wosua. Enti monsrɛ otwa wura no, na ɔmma adwumayɛfo mmra ne twa adwuma no mu!”—Mateo 9:37, 38.
5 Nea ɛne Yesu mpaebɔ no hyia no, ɔtetee afoforo ma wɔbɛyɛɛ asɛmpakafo. Bere kɔɔ so no, ɔsomaa n’asomafo no nko ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mokɔ a, monkɔka sɛ: Ɔsoro ahenni no abɛn.” So anka ɛbɛyɛ nea mfaso wɔ so kɛse sɛ wɔbɛyɛ nhyehyɛe de atew nkurɔfo asetram haw ahorow so? Anaasɛ anka ɛsɛ sɛ wɔde wɔn ho hyɛ amammuisɛm mu ko tia amumɔyɛsɛm a na abu so saa bere no? Dabi. Mmom no, Yesu de gyinapɛn no sii hɔ maa Kristofo asɛmpakafo nyinaa bere a ɔka kyerɛɛ n’akyidifo no sɛ: ‘Mokɔ a, monka asɛm no.’—Mateo 10:5-7.
6 Akyiri yi, Yesu somaa asuafo kuw foforo sɛ wɔnkɔka sɛ: “Ɔsoro ahenni abɛn.” Bere a wɔbae de nea wotumi yɛe wɔ asɛnka mu ho amanneɛ bɛbɔɔ Yesu no, n’ani gyei. Ɔbɔɔ mpae sɛ: “Agya, ɔsoro ne asase wura, miyi wo ayɛ sɛ wode nneɛma yi ahintaw anyansafo ne animdefo, na woayi akyerɛ nkokoaa.” (Luka 10:1, 8, 9, 21) Sɛ na wɔde Yesu asuafo a na wɔn mu bi yɛ apofofo, akuafo, ne nea ɛkeka ho a wɔyɛ adwumaden no toto ɔman no mu nyamesom akannifo a wɔyɛ nhomanimfo akɛse no ho a, na wɔte sɛ nkokoaa. Nanso, wɔtetee asuafo no ma wɔkaa asɛmpa a eye sen biara no.
7. Bere a Yesu foro kɔɔ soro no, henanom na n’akyidifo kaa asɛmpa no kyerɛɛ wɔn?
7 Bere a Yesu kɔɔ soro no, n’akyidifo no kɔɔ so trɛw nkwagye ho asɛmpa no mu. (Asomafo no Nnwuma 2:21, 38-40) Henanom na wodii kan kaa asɛm no kyerɛɛ wɔn? So wɔkɔɔ amanaman a na wonnim Onyankopɔn no nkyɛn? Dabi, na wɔn asasesin a edi kan ne Israel, nkurɔfo a na wɔde bɛboro mfirihyia 1,500 nim Yehowa no. So na wɔwɔ hokwan sɛ wɔka asɛm no wɔ baabi a na nkurɔfo som Yehowa dedaw no? Yiw. Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: ‘Mobɛyɛ m’adansefo Yerusalem ne Yudea nyinaa ne Samaria de akɔpem asase ano nohoa.’ (Asomafo no Nnwuma 1:8) Na ehia sɛ Israelfo te asɛmpa no sɛnea na ehia sɛ ɔman foforo biara te no.
8. Ɔkwan bɛn so na Yehowa Adansefo suasua Yesu akyidifo a wɔtraa ase wɔ afeha a edi kan no mu no?
8 Saa ara na Yehowa Adansefo ka asɛm wɔ asase nyinaa so nnɛ. Wɔne ɔbɔfo a Yohane huu no a na “okura daa asɛmpa bi rekɔka akyerɛ wɔn a wɔte asase so, ne aman ne mmusuakuw ne kasa ne nkurɔfo nyinaa” no ayɛ biako. (Adiyisɛm 14:6) Wɔ afe 2001 mu no, na wɔreyɛ adwuma denneennen wɔ nsase ne nsasesin 235 so, a ebinom a wobu no sɛ ɛsotefo yɛ Kristofo ka ho. So ɛyɛ mfomso sɛ Yehowa Adansefo bɛka asɛm wɔ mmeae a Kristoman asɔreasɔre wɔ dedaw no? Ebinom se ɛyɛ mfomso, na wobetumi abu asɛmpaka a ɛte saa sɛ nea “wɔde wia nguan.” Nanso, Yehowa Adansefo kae sɛnea na Yesu te nka ma Yudafo ahobrɛasefo a na wɔwɔ ne bere so no. Ɛwom sɛ na wɔwɔ asɔfokuw dedaw de, nanso Yesu antwentwɛn ne nan ase sɛ ɔbɛka asɛmpa no akyerɛ wɔn. Ne “yam hyehyee no maa wɔn, efisɛ na wɔabrɛ, na wɔsam hɔ sɛ nguan a wonni hwɛfo.” (Mateo 9:36) Sɛ Yehowa Adansefo hu ahobrɛasefo a wonnim Yehowa ne N’ahenni ho hwee a, so ɛsɛ sɛ wɔde asɛmpa no kame nnipa a wɔte saa esiane sɛ ɔsom bi kyerɛ sɛ ɛwɔ wɔn so tumi nti? Yedi Yesu asomafo no nhwɛso akyi bua sɛ dabi. Ɛsɛ sɛ yɛka asɛmpa no “kyerɛ amanaman nyinaa” a yɛnyɛ nyiyim.—Marko 13:10.
Tete Kristofo Nyinaa Kaa Asɛm no Bi
9. Wɔ afeha a edi kan no mu no, Kristofo asafo no mufo bɛn na wɔyɛɛ asɛnka adwuma no?
9 Henanom na wɔyɛɛ asɛnka adwuma no bi wɔ afeha a edi kan no mu? Adanse a ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ na Kristofo no nyinaa yɛ asɛmpakafo. Nhoma kyerɛwfo W. S. Williams ka sɛ: “Adanse a ɛwɔ hɔ kyerɛ sɛ tete Asɔre no mufo . . . nyinaa kaa asɛmpa no bi.” Ɛdefa nsɛm a esisii wɔ Pentekoste afe 33 Y.B. mu ho no, Bible no ka sɛ: “Na Honhon Kronkron yɛɛ wɔn nyinaa [mmarima ne mmea] mama, na wofii ase kasaa kasa foforo, sɛnea Honhom no maa wɔn sɛ wɔnka.” Mmarima ne mmea, mmofra ne mpanyin, nkoa ne adehye, bɛyɛɛ asɛmpakafo. (Asomafo no Nnwuma 1:14; 2:1, 4, 17, 18; Yoel 2:28, 29; Galatifo 3:28) Bere a ɔtaa maa Kristofo pii guan fii Yerusalem no, “wɔn a wɔhwetee no kyinkyin kɔkaa asɛmpa no.” (Asomafo no Nnwuma 8:4) “Wɔn a wɔhwetee no” nyinaa, ɛnyɛ nnipa kakraa bi a wɔapaw wɔn, kɔkaa asɛm no.
10. Ahyɛde a ekura atirimpɔw abien bɛn na wodii ho dwuma ansa na wɔresɛe Yudafo nhyehyɛe no?
10 Ɛda adi sɛ saa na wɔyɛe wɔ tete mmere no mu nyinaa. Yesu hyɛɛ nkɔm sɛ: “Wɔbɛka ahenni ho asɛmpa yi wiase nyinaa de adi amanaman nyinaa adanse; ɛno ansa na awiei no bɛba.” (Mateo 24:14) Wɔ saa nsɛm no mmamu wɔ afeha a edi kan no mu no, wɔkaa asɛmpa no kɔɔ akyiri ansa na Romafo asraafo resɛe Yudafo nyamesom ne amammui nhyehyɛe no. (Kolosefo 1:23) Afei nso, Yesu akyidifo no nyinaa tiee n’ahyɛde no: “Enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa m’asuafo. Mommɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu, na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wonni nea mahyɛ mo nyinaa so.” (Mateo 28:19, 20) Tete Kristofo no anhyɛ ahobrɛasefo no nkuran sɛ wonnye Yesu nni na afei wɔagyaw wɔn sɛ obiara mfa ne kwan, sɛnea nnɛyi asɛmpakafo binom yɛ no. Mmom no, wɔkyerɛkyerɛɛ wɔn sɛ wɔmmɛyɛ Yesu asuafo, hyehyɛɛ wɔn yɛɛ wɔn asafo ahorow, na wɔtetee wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso betumi aka asɛmpa no na wɔayɛ asuafo. (Asomafo no Nnwuma 14:21-23) Yehowa Adansefo di saa nhwɛso no akyi nnɛ.
11. Henanom na wɔka asɛmpa a eye ma adesamma sen biara no ho asɛm kyerɛ?
11 Bere a Yehowa Adansefo dodow bi redi Paulo, Barnaba, ne afoforo a wɔtraa ase wɔ afeha a edi kan no mu nhwɛso akyi no, wɔakɔ amannɔne nsase so sɛ asɛmpatrɛwfo. Mfaso aba wɔn adwuma no so ankasa, efisɛ wɔmfaa wɔn ho nhyehyɛɛ amammuisɛm anaa akwan foforo a ɛne wɔn ahyɛde a ɛne sɛ wɔnka asɛmpa no nni abusuabɔ mu. Wɔatie Yesu ahyɛde a ɛne sɛ: ‘Mokɔ a, monka asɛm no.’ Nanso, Yehowa Adansefo dodow no ara nyɛ asɛmpatrɛwfo wɔ amannɔne nsase so. Wɔn mu pii yɛ adwuma hwɛ wɔn ho, na afoforo da so kɔ sukuu. Ebinom retetew mmofra. Nanso Adansefo nyinaa ka asɛmpa a wɔasua no kyerɛ afoforo. Mmofra ne mpanyin, mmarima ne mmea, de anigye tie Bible mu afotu yi: “Pae mu ka asɛm no, gyina mu ɛbere a eye ne nea enye mu.” (2 Timoteo 4:2) Te sɛ wɔn adikanfo a wɔtraa ase wɔ afeha a edi kan no mu no, ‘wonnyae Yesu Kristo ho asɛmpa no ka ne kyerɛkyerɛ asɔrefie ne afie mu da biara.’ (Asomafo no Nnwuma 5:42) Wɔreka asɛmpa a eye sen biara akyerɛ adesamma.
Wɔma Afoforo Sakra Wɔn Som Anaa Wɔka Asɛmpa?
12. Dɛn ne afoforo som a wɔsakra, na adwene bɛn na wɔabenya wɔ ho?
12 Wɔ Hela kasa mu no, wɔwɔ asɛmfua pro·se’ly·tos, a ɛkyerɛ “obi som a ɔsakra.” Eyi mu na wonyaa Engiresi asɛmfua “proselytism,” a nea ɛkyerɛ titiriw ne “afoforo som a wɔsakra” fii. Nnansa yi ebinom ka sɛ ɛyɛ adebɔne sɛ obi bɛma afoforo asakra wɔn som. Asɛm bi a Wiase Asɔreasɔre Bagua no kyerɛwee ka mpo sɛ “afoforo som a wɔsakra yɛ bɔne.” Dɛn ntia? Catholic World Report ka sɛ: “Sɛnea Ortodɔksfo kɔ so ka ho asɛm pii no ama ‘afoforo som a wɔsakra’ abegye din sɛ afoforo a wɔhyɛ wɔn ma wɔsakra wɔn som.”
13. Dɛn ne afoforo som a wɔsakra a enye no ho nhwɛso ahorow bi?
13 So afoforo a wɔma wɔsakra wɔn som yɛ adebɔne? Ebetumi aba saa. Yesu kae sɛ ɛyɛ adebɔne ma afoforo a kyerɛwfo ne Farisifo no ma wɔsakraa wɔn som no. (Mateo 23:15) Akyinnye biara nni ho sɛ, “afoforo a wɔhyɛ wɔn ma wɔsakra wɔn som” yɛ bɔne. Sɛ nhwɛso no, sɛnea abakɔsɛm kyerɛwfo Josephus kyerɛ no, bere a Maccabeeni John Hyrcanus dii Idumeafo so nkonim no, “ɔmaa wɔtraa wɔn man mu bere tenten a wotwaa twetia na wɔpɛe sɛ wodi Yudafo mmara so no.” Sɛ na Idumeafo bɛtra Yudafo no nniso ase a, na ɛsɛ sɛ wɔde wɔn ho hyɛ Yudasom mu. Abakɔsɛm akyerɛwfo ka kyerɛ yɛn sɛ wɔ afeha a ɛto so awotwe Y.B. mu no, Charlemagne dii Saxonfo abosonsomfo a wɔwɔ Europa atifi fam no so, na ɔnam ayayade so ma wɔsakraa wɔn som. * Nanso, koma pa bɛn na Saxonfo anaa Idumeafo no de sakraa wɔn som? Sɛ nhwɛso no, nokware bɛn na Idumea hene Herode—a ɔbɔɔ mmɔden sɛ obekum akokoaa Yesu no—dii wɔ Mose Mmara a Onyankopɔn honhom kaa no ma ɔkyerɛwee no ho?—Mateo 2:1-18.
14. Ɔkwan bɛn so na Kristoman mu asɛmpatrɛwfo binom hyɛ nnipa ma wɔsakra?
14 So wɔhyɛ afoforo ma wɔsakra wɔn som nnɛ? Ebinom yɛ saa ɔkwan bi so. Wɔbɔ amanneɛ sɛ Kristoman mu asɛmpatrɛwfo bi hwɛ ma nkurɔfo a wɔasakra wɔn a wɔyɛ nnam no kosua nhoma wɔ amannɔne. Anaasɛ wɔma aguanfo a wodi kɔm tra ase tie wɔn nsɛm sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya aduan kakra. Sɛnea asɛm bi a wɔkae wɔ Ortodɔks Asɔfo Mpanyin nhyiam bi ase wɔ afe 1992 kyerɛ no, “ɛtɔ mmere bi a wɔnam honam fam nneɛma so ma ebinom sakra, na ɛtɔ mmere bi nso a wɔnam basabasayɛ ahorow so na ɛyɛ saa.”
15. So Yehowa Adansefo ma nkurɔfo sakra wɔn som sɛnea asɛm no kyerɛ nnɛ no? Kyerɛkyerɛ mu.
15 Ɛyɛ mfomso sɛ wɔbɛhyɛ nkurɔfo ma wɔasakra wɔn som. Akyinnye biara nni ho sɛ, Yehowa Adansefo nyɛ wɔn ade wɔ saa kwan no so. * Enti, wɔmma nkurɔfo nsakra wɔn som sɛnea asɛm no kyerɛ nnɛ no. Mmom no, te sɛ afeha a edi kan no mu Kristofo no, wɔka asɛmpa no kyerɛ obiara. Wɔto nsa frɛ obiara a ofi ne pɛ mu tie no, na wɔne no yɛ Bible adesua ma onya nimdeɛ pii. Anigyefo a wɔte saa no sua sɛ wɔnam Bible mu nokware nimdeɛ so benya Onyankopɔn ne n’atirimpɔw ahorow mu gyidi. Ne saa nti, wɔbɔ Yehowa Nyankopɔn din, sɛnea wobenya nkwa. (Romafo 10:13, 14, 17) Sɛ́ wobegye asɛmpa no atom anaasɛ wɔrennye ntom no yɛ ankorankoro asɛm. Wɔnhyɛ obiara. Sɛ wɔhyɛ nkurɔfo a, wɔn adwensakra no bɛyɛ nea mfaso biara nni so. Sɛ Onyankopɔn ani bɛsɔ obi som a, ɛsɛ sɛ ɛyɛ nea efi koma mu.—Deuteronomium 6:4, 5; 10:12.
Asɛmpaka Adwuma Wɔ Nnɛ Bere Yi Mu
16. Ɔkwan bɛn so na asɛmpaka adwuma a Yehowa Adansefo yɛ no anya nkɔso nnɛ mmere yi mu?
16 Yehowa Adansefo aka Ahenni ho asɛmpa no ama Mateo 24:14 anya ne mmamu wɔ nnɛ mmere yi mu. Adwinnade a wɔde di dwuma titiriw wɔ wɔn asɛmpaka adwuma no mu ne Ɔwɛn-Aban nsɛmma nhoma no. * Bere a edi kan a wotintim Ɔwɛn-Aban no wɔ afe 1879 mu no, na wotintim nsɛmma nhoma no bɛyɛ 6,000 wɔ kasa biako mu. Wɔ afe 2001 mu, bɛboro mfirihyia 122 akyi no, nea wotintim no dodow adu 23, 042,000 wɔ kasa 141 mu. Ade a anya nkɔso saa ara ne Yehowa Adansefo asɛmpaka adwuma no. Fa nnɔnhwerew mpempem kakra a na wɔde yɛ asɛmpaka adwuma no wɔ afeha a ɛto so 19 no mu no toto nnɔnhwerew 1,169,082,225 a wɔde yɛɛ asɛnka adwuma no wɔ afe 2001 mu no ho hwɛ. Susuw Bible adesua a wontua hwee 4,921,702 a sɛ wɔkyekyɛm pɛpɛɛpɛ a wɔyɛe ɔsram biara no ho hwɛ. Adwuma pa kɛse bɛn ara na wɔyɛe sɛɛ yi! Ahenni adawurubɔfo a wɔyɛ nnam 6,117,666 na wɔyɛɛ adwuma yi.
17. (a) Atoro anyame bɛn na wɔsom wɔn nnɛ? (b) Ɛmfa ho kasa a obi ka, ɔman a ofi mu, anaa n’asetram gyinabea no, dɛn na ɛsɛ sɛ ohu?
17 Odwontofo no kae sɛ: “Aman anyame nyinaa yɛ abosonhuhuw, na [Yehowa, NW] mmom na ɔyɛɛ ɔsoro.” (Dwom 96:5) Wɔ ɛnnɛ wiase no, ɔmampɛ, ɔman agyiraehyɛde, nnipa a wɔagye din, honam fam nneɛma, ne ahonyade mpo yɛ nneɛma a wɔsom. (Mateo 6:24; Efesofo 5:5; Kolosefo 3:5) Mohandas K. Gandhi kae bere bi sɛ: “Migye di paa sɛ . . . wɔn a wɔka kɛkɛ sɛ wɔyɛ Kristofo nkutoo na wɔwɔ Europa nnɛ. Wɔresom Mammon [ahonyade] ankasa.” Nokwasɛm ne sɛ, ɛsɛ sɛ wɔte asɛmpa no wɔ baabiara. Ɛsɛ sɛ obiara te Yehowa ne n’atirimpɔw ho asɛm, a kasa a ɔka, ɔman a ofi mu, anaa n’asetram gyinabea mfa ho. Yɛn yam a anka obiara agye odwontofo no nsɛm yi atom: “Momfa anuonyam ne tumi mma [Yehowa, NW]. Momfa [Yehowa, NW] din anuonyam mma no”! (Dwom 96:7, 8) Yehowa Adansefo boa afoforo ma wosua Yehowa ho ade sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi ahyɛ Yehowa anuonyam wɔ ɔkwan a ɛfata so. Wɔn a wɔyɛ saa no nya mfaso kɛse. Mfaso bɛn na wonya? Yebesusuw eyinom ho wɔ asɛm a edi hɔ no mu.
^ nky. 13 Sɛnea The Catholic Encyclopedia kyerɛ no, wɔnam nnyinasosɛm yi so na ɛhyɛɛ nkurɔfo ma wɔde wɔn ho hyɛɛ ɔsom bi mu wɔ Ɔsesɛw bere no mu: Cuius regio, illius et religio (Nea eyi kyerɛ ni: “Nea odi asase no so no na ɔkyerɛ ɔsom a ɛsɛ sɛ ɛsotefo de wɔn ho hyɛ mu.”)
^ nky. 15 Wɔ nhyiam bi a United States Amanaman Ntam Nyamesom mu Ahofadi Adwuma no yɛe wɔ November 16, 2000 ase no, nhyiamfo bi kyerɛɛ nsonsonoe a ɛda wɔn a wɔhyɛ afoforo ma wɔsakra wɔn som ne Yehowa Adansefo dwumadi no ntam. Wɔdaa no adi sɛ sɛ Yehowa Adansefo ka asɛm no kyerɛ afoforo a, wɔyɛ saa wɔ ɔkwan bi a ɛbɛma obi atumi aka sɛ “M’ani nnye ho” na wato ne pon mu so.
^ nky. 16 Nsɛmma nhoma no asɛmti ankasa ne Ɔwɛn-Aban Ɛka Yehowa Ahenni Kyerɛ.
So Wubetumi Akyerɛkyerɛ Mu?
• Dɛn nti na Yehowa Adansefo yɛ asɛm- pakafo a wɔyɛ nsi?
• Dɛn nti na Yehowa Adansefo ka asɛm wɔ baabi a Kristoman mu asɔreasɔre wɔ no mpo?
• Dɛn nti na Yehowa Adansefo nyɛ wɔn a wɔma nkurɔfo sakra wɔn som sɛnea asɛm no kyerɛ nnɛ no?
• Ɔkwan bɛn so na Yehowa Adansefo asɛmpaka adwuma no anya nkɔso wɔ nnɛ bere yi mu?
[Mfonini wɔ kratafa 9]
Ná Yesu yɛ ɔsɛmpakafo a ɔyɛ nsi, na ɔtetee afoforo ma wɔn nso yɛɛ adwuma koro no ara
[Mfonini wɔ kratafa 10]
Afeha a edi kan asafo no mufo nyinaa yɛɛ asɛmpaka adwuma no bi
[Mfonini wɔ kratafa 11]
Ɛyɛ mfomso sɛ wɔbɛhyɛ nkurɔfo ma wɔasakra wɔn som
Share Share Nokware Kristofo Nyinaa Yɛ Asɛmpakafo
w02 1/1 kr. 8-13
Nnipa Mu Nyiyim Ho Nsɛnnennen No
So Sen A Obi Nsen Obi Betumi Ayɛ Yiye?
Asɛmpa No Mu Nhyira Horow
Yehowa Ama “Tumi A Ɛboro So”
Mpanyimfo—Montete Afoforo Mma Wɔnsoa Adesoa no Bi
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 1, 2002
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 1, 2002
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM January 1, 2002